Office Staff | Thanlwin International Co., Ltd. ﻿
8.8.2019, Full time , Retail / Wholesale
•	အသက် (၃၅) နှစ်အောက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	စာစီစာရိုက် ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး Communication ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	ဘွဲ့ ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
•	ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ပြီး သွက်လက်သူဖြစ်ရမည်။
•	ရွှေပြည်သာမြို့ နယ်နှင့် အင်းစိန်မြို့ နယ်တို့ တွင် ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
We offer •	Female Only
Work location ပြည်လမ်း၊ ဆယ်မိုင်မှတ်တိုင်အနီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။
Job posted: 8/8/2019
Thanlwin International Co., Ltd.
61 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	Communication Skill Management Skill Interpersonal Skillရှိသူဖြစ်ရမည်။
A Well-known Myanmar Construction Material Trading Company. To contribute towards the development of quality living standards & lifestyles of our customers in Myanmar by offering highest customers services with “Readiness & Availability” based on our hard-earned experiences in the construction materials trading, by continuous maintenance of existing business partners, and finding business ties with new suppliers from within the nation, and neighboring countries in the region. “Thanlwin International Co.,Ltd” emphasizes to provide the real-time quality products to the needs of various customers so as to totally match with ever improving quality of living standards and lifestyles in the market by outsourcing the needful materials from within and abroad aiming to be one-stop ideal place be relied on by our customers and business partners.Description To ensure consistent provision of best proper materials this would be of absolute-match to the dreams of our customer’s social and living values. To guarantee expert consultation for cost efficiency, timely door-to-door delivery of materials, and importation of essential & special goods to our customers as part of our service program. To expand our scope of business dynamics by partying utility of technology, network, information and business dealing together with our existing, new customers and business partners.
80 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	Management Skill ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	Transpotation ပိုင်းနားလည်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	English Skill,Computer Skill, Interpesonal Skill ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
•	HR Certificate ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ •	အတွေ့အကြုံ ရှိသူ ၊ Recruiting ပိုင်းစိတ်ဝင်စားသူ ဖြစ်ရမည်။
Waitress F (1)
89 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	ထမင်းပွဲအရေအတွက်စာရင်းများ လုပ်နိုင်ရမည်။ •	အဆောင်နေနိုင်သူ အိမ်ထောင်မရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
Storekeeper M (2)
•	ကြိုးစား၍ ရေရှည်ိလုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်တွင် ဆင်းနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
HR Trainee M/F (2)
•	အတွေ့အကြုံ ရှိသူ ၊ Recruiting ပိုင်းစိတ်ဝင်စားသူ ဖြစ်ရမည်။ •	အင်းစိန်မြို့နယ်ိတွင်ဆင်းနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
Office Trainee M/F (2)
•	ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး Communication ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ပြီး သွက်လက်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Sale F (1)
•	အရောင်းပိုင်းစိတ်ဝင်စားသူ ဖြစ်ရမည်။ •	အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ •	အင်းစိန် မြို့နယ် တွင်ဆင်းနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
Office Trainee F (1)
•	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	အင်းစီန်မြို့နယ်တွင် ဆင်းနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
107 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိပြီးအဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Computer (Microsoft Office)ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နှင့်အင်းစိန်မြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Company ၏ Adminလုပ်ငန်းစဉ်များအားနားလည်ပြီးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အင်းစိန်မြို့နယ်တွင်ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Communicationကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Interpersonal Skill, Management Skill, Communication skillရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	Sales TeamအားTrainingပေးနိုင်သူ၊managementကောင်းစွာပေးနိုင်သူ၊ရောင်းအားပြည့်မီအောင်ရောင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Problem Solvingများကိုလည်းလိမ္မာပါးနပ်စွာဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။ •	Computer (Microsoft Office), Photoshopကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အသက်၂၅နှစ်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	အင်းစိန်မြို့နယ်တွင်ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
122 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	မြို့ တွင်းလမ်းကြောင်းများ ကျွမ်းကျင်ပြီး နယ်လမ်းကြောင်းများလည်း မောင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လိုင်စင်သက်တမ်း (၃)နှစ်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	အရက်သောက်တတ်သူ၊ မျက်မှန်တပ်ဆင်ထားသူများမဖြစ်ရပါ။ •	ဘယ်/ ည� ...
•	ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ပြီး သွက်လက်သူဖြစ်ရမည်။ •	အရောင်းပိုင်းစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ •	အတွေ့ အကြုံမရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
•	အသက် (၃၅) နှစ်အောက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	စာစီစာရိုက် ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး Communication ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	Computer ကျွမ်းကျင်စွာ သုံးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Payroll ကျွမ်းကျင်စွာ ရေးဆွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Communication, Personal Gromming ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	Computer ကျွမ်းကျင်စွာ သုံးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Program Knowledge ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	အသက် (၃၅) နှစ်အောက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	Communication, Personal Gromming ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	Store အ၀င်အထွက်ပစ္စည်း စာရင်းများ ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Stock ပိုင်းနားလည်သူဖြစ်ရမည်။ •	ကြိုးစား၍ ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Company အတွက်လိုအပ်သော Services လုပ်ငန်းစဉ်များအား နားလည်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အစိုးရရုံးများနှင့် ၀င်ထွက်သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။
•	Computer ၏ M&E လုပ်ငန်းစဉ်များအား နားလည်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အင်းစိန်မြို့ နယ်တွင် ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။
•	Performance Appraisal, KPI နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	Communication, Personal Gromming ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။
•	HR Function, Labour Law နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	HR/ Admin Function များအား ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Communication, Personal Gromming ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	Graphic Design, Photshop, Illustrator ရရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ •	အတွေ့ အကြုံရှိ၍ ရေရှည်လက်တွဲ လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • လုပ်ငန်း	ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Computer (Microsoft Office) ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Procurement လုပ်ငန်းစဉ်များအား နားလည်ပြီး တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Interpersonal skill, Leadership skill, Management skill ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	English4skills ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	PA လုပ်ငန်းစဉ်များအား နားလည်ပြီး လိမ္မာပါးနပ်သူဖြစ်ရမည်။ •	Interpersonal Skill, Communication Skill, Management Skill ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
404 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	ပစ္စည်းအ၀င်အထွက်၊ လူအ၀င်အထွက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး အရက်မသောက်တတ်သူဖြစ်ရမည်။ •	မည့်သည့် ဂျူတီချိန်မဆို တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	ပူးပေါင်းဆောင်ရွှက်တတ်ပြီး ရုံးကိစ္စများနားလည်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ပြီး သွက်လက်သူဖြစ်ရမည်။
•	Cash & Bank Transaction, Prepaid & Accrual Account, Other Income transaction စစ်ဆေးခြင်းများလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Computer Basic and Software များ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဆယ်မိုင်အနီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်သည်။
•	သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိပြီး အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွှက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်သည်။ •	ဆယ်မိုင်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ရုပ်ရည်ပြေပြစ်သွက်လက်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	အရောင်းပိုင်းစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ •	ဆယ်မိုင်မှတ်တိုင်အနီး အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Office Staff Admin, Secretarial & PA Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Thanlwin International Co.Ltd Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Retail / Wholesale Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Inventory Audit Assistant
Star Wholesale Centre(Yangon)
Royal Ayeyarwaddy co. ltd
WaWa Convenience Store
METRO Wholesale Myanmar Ltd
Yangon (Rangoon) 122 Days